शुरुवातका लागि सिलाई - म पहिलोमा के सिलाई गर्न सक्छु र मैले कसरी सुरु गर्न सक्छु?
Beginner को लागि सिलाई | हस्तनिर्मित DIY
शुरुवातका लागि विचारहरू सिलाई
यदि तपाईं सिलाई गर्न नयाँ हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई आधारभूत उपकरण चाहिन्छ।
सिलाईको लागि राम्रो उपकरण - राम्रो काम
राम्रो उपकरण बिना राम्रो काम गर्न सकिँदैन। सिलाई गर्दा, यो धेरै ध्यानपूर्वक काम गर्न महत्त्वपूर्ण छ ताकि अन्तिम परिणाम दृश्यात्मक रूपमा देखिन्छ। यदि विचार र ढाँचाहरूको कुनै कमी छैन भने, यो अहिले केही थोरै चीजहरूसँग सुरु गर्न सक्दछ। सिलाई गर्न को लागी नयाँ जो कि उसले कुन खरिद गर्न चाहन्छ भनेर जान्न आवश्यक छ। प्रायजसो सीमट्रेटहरू र भान्साहरू एक राम्रो कपास यार्न प्रयोग गर्छन्। विशेषज्ञहरू सामग्री र धागाको सामानमा निर्भर हुन्छन्।
सिलाई गर्दा शुरुवातका लागि सही उपकरण
धागा कुनै पनि परिस्थितिमा सुरक्षित हुँदैन। एक धेरै उच्च आंसु बल मात्र सिलाई गर्दा, तर पछि प्रयोगको क्रममा पनि महत्त्वपूर्ण छ। सिलाई मेनुमा निरन्तर खपत धागा भन्दा बढी केही कष्टप्रद छ। फेरि फेरि यो पिरोया हुनुपर्छ। यो न केवल समय खर्च गर्दछ, तर पनि नर्वे र अक्सर सिलाई गर्न चाहने हराएको छ। एक बुलाया सिलाई सिलाई मात्र शुरुवात शुरुवातका लागि मात्र होइन। यो प्राय: पलिएस्टरको बनाइएको छ र सबै कपडाहरूको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। रेहगर्न सर्वोत्तम भागहरूको लागि उपयुक्त छ। यो धेरै छिटो आँसु र सही सीम सेट भएको बेला सजिलै हटाउन सकिन्छ।
यहां सम्म कि कैंची जो जोडीहरु संग, सबै को, सिलाई गर्न को लागि नयाँ न केवल, राम्रो सामाग्री छान्नु पर्छ। एक उचित टिलिंग कैंची, जो वास्तव मा केवल कपडे काटने को लागि प्रयोग गरिन्छ, एक पूर्ण जरूरी छ। दर्जी कैंचीहरू लामो ब्लेड छन्, प्राय: एक भारी धातुको बनाइन्छ र जीवनको प्रत्याशाको लामो लामो हुन्छ भने यदि यो गलत हुँदैन। कागज वा अन्य सामग्री उनको साथ काटिएको छैन - केवल कपडा।
कपडाहरू छनौट गर्न कुनै सीमा छैन। सबै चीज उपलब्ध छ। सबै सामग्रीहरू, सबै रङहरू - सादा र रंगीन र साथै सबै मूल्यहरू। पदार्थ चयन गर्दा, यो एक विशेषज्ञ बजार चयन गर्न बिल्कुल आवश्यक छैन। इन्टरनेटमा धेरै राम्रो सौदा हुन सक्छ। शुरुवातको लागी, कपडा बाहिरिने बाकस को बक्स प्राप्त गर्न को लागि अक्सर यो पर्याप्त छ। यी संग, एक शुरुवातले पहिलो प्रयास गर्न र अभ्यास गर्न सक्दछ। एकपटक राम्रो राम्रो भएपछि, तपाईं ठूलो परियोजनामा ​​हिम्मत गर्न सक्नुहुन्छ।
एक सिकिमेमेमेटेट जरूरी आधारभूत उपकरणको भाग हुनु पर्दैन, तर धेरै सहयोग गर्दछ, खासगरी यदि आयामहरू यसमा छन्। यदि तपाईं रोलर ब्लेडको साथ काम गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले यसलाई जगेडाको रक्षा गर्न यसलाई दिनुहुन्न।
यदि यो कहिले काँही एक सिउनी सही वा धेरै तंग वस्त्र कि widened गर्न बन सिले छैन तर, महत्वपूर्ण एक दर्जी गरेको नाप्ने टेप, विभिन्न आकार टाउको पिन धेरै, विभिन्न आकार र thicknesses मा सिलाई सुई र सिउनी खूनी हुनेछ।
सिलाई गर्न नयाँ छ जो पहिले नै यो आधारभूत उपकरण संग राम्रो तरिकाले सुसज्जित छ र उनको रचनात्मकता जंगली चलाउन सक्छ।
जो कोही बाँच्ने सिलाई कमाउँदैन, तर धागा र सुईको लागि समर्पित शौकको रूपमा प्राय: विचारहरू सिमाउने छ।
यो समझदार वा व्यावहारिक हुनुपर्छ। तर के गर्ने सिलाई? प्रेरणा र सिलाई विचारका लागि राम्रो अवसर शहर को माध्यम ले टहलने को लागि छ। अक्सर तपाईंले चीजहरू पत्ता लगाउनुहुन्छ जहाँ सोच्न आउँछ "म पनि गर्न सक्छु"। यदि तपाईं आफ्नो अलमारी को माध्यम ले पनि गड़बड़ को रूप मा, एक पल्ट अक्सर कपडे छ कि अप्रचलित भएको छ, तर दूर गर्न को लागि राम्रो हो।
सिलाईको लागि नयाँ विचारहरू फेला पार्नुहोस्
उदाहरणका लागि, पुरानो जोडाहरू धेरै फरक कुराहरूमा पुनःनिर्मित गर्न सकिन्छ। माथिल्लो, जिपर र ब्याक जेबको साथमा कमरब्यान्ड, पूर्ण रुपमा एक ठाडो थलोमा बदल्न सकिन्छ।
विचार सिलाई पनि जब सिलाई पनि आउँदछ।
जीन्सको खुट्टा सिद्धान्तमा पहिले नै लगभग गर्दन रोल वा सानो जेबको लागि तैयार छ। सुन्दर अनुप्रयोगहरू मायालु ढंगले डिजाइन गरिएका उपहारहरू उठ्न सक्छन्। कुपन समावेश गर्ने साना थलो - धेरै सिलाईका विचारहरू जस्तै।
हुन सक्छ त्यहाँ कुनै सम्बन्धमा वा साथीहरूको सर्कलमा सिलाई संग सौदा छ। यी प्रायः धेरै ढाँचाहरू र कपडाहरू अवशेषहरूको धेरै पनि छन्, जसले व्यावहारिक कुरामा विकास गर्न सक्छ। बच्चाहरु को लागि स्तन बैग या ठाठ र फैशनेबल टोपहरु को निर्माण गर्न सकिन्छ। सिलाई ढाँचाहरू लगभग सबै ठाउँमा उपलब्ध छन्। म्याग्दी व्यापारले म्याग्दीहरू आफैले दशैंका लागि बजारमा स्थापना गरेको छ। प्रत्येक मुद्दाले ढाँचा समावेश गर्दछ। उदाहरणको लागि, यदि तपाईं सुन्दर स्कर्ट सिलाई गर्न चाहनुहुन्छ भने, यस्तो ढाँचाको खोजी गर्नुहोस् र सुरु गर्नुहोस्।
कपडा पसलहरूमा - तथापि, धेरै दुर्लभ भएका छन् - पदार्थहरू खरिद गर्न सकिन्छ जसले थप नेभिडेन ल्याउँदछ। सेल्सम्यानम वा सीमट्रेसको कुराकानीले नयाँ सिलाई विचार ल्याउँछ।
उदाहरणको लागि, उदाहरणका लागि, टेरीकोटबाट बनेका साना जनावरहरू, जो बाथटबमा लिन सकिन्छ। बच्चाहरू निश्चित रूपमा खुसी छन् र धेरै पैसा सुरक्षित गरिएको छ। बस फोम संग भरें र स्नान पछि सुखाने को हीटर मा राख्नुहोस।
इन्टरनेटमा थप सिलाई विचारहरू पनि उपलब्ध छन्।
यो कसरी ब्लगहरू यो विषय विशेष रूपमा यस विषयको साथ सिर्जना गरिएको छ।
बहुतायतका विचारहरू सिलाई। यदि तपाइँ एक विशेष विषयमा चासो राख्नुहुन्छ भने, तपाइँले ब्लगमा मात्र कुराकानी प्रविष्टि गर्नुहुनेछ र प्राय: आगन्तुकले पनि इ-मेल द्वारा केहि मिनेटमा पठाइएको पैटर्नहरू प्रदान गर्दछ।
त्यसोभए तपाईं तुरुन्तै विचारहरू सिलाई गर्न आउनुभयो जुन तपाईसँग भएको छैन। यदि तपाईं केहि परिष्कृत चाहनुहुन्छ भने, तपाइँ सम्बन्धित वेबसाइटहरूमा जानुपर्छ। त्यहाँ तपाइँ निर्देशनहरू र ढाँचाहरू उदाहरणको लागि ककटेल कपडाहरू वा पतलून सूट र वेशभूषाहरू पाउनुहुनेछ। विचारहरू सिधै सँधै र हरेक ठाउँ खोज्नका लागी - केवल हेर्नु र कल्पना र रचनात्मकतामा भोग्नु।
शुरुवातीको लागि क्रिकेट | सुई कार्य उपकरण
सिलाई - दाहिने सिलाई मेसिन
सिलाई - मैले कुन कपडा प्रयोग गर्छु?
बच्चाहरु संग सिलाई
योगाका लागि शुरुवात
DIY र हस्तशिल्प
मोमबत्तीहरू | DIY
आगमन क्यालेन्डर - DIY क्रिसमस
क्रिकेट बेबी मोजे - DIY
Crochet बच्चा दस्ताने - DIY
Crochet बच्चा टोपी - DIY
बच्चाहरु संग टिंकर - DIY